प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा किन उठेन बुलेट ? – Makalukhabar.com
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा किन उठेन बुलेट ?
काठमाडौं, भदौ १० । नेपालको निजी क्षेत्रले भारतमा निर्माण गरेको नेपाली नम्बरको बुलेट सञ्चालनको विषय अझै ‘अन्योल’ मा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा यो विषयमा छलफल नहुँदा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्ने काम अनिश्चित बनेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।